DHEGEYSO-Afhayeenka dowladda Puntland oo kahadlay dhaqangelinta awaamiirtii Galkacyo. – Radio Daljir
DHEGEYSO-Afhayeenka dowladda Puntland oo kahadlay dhaqangelinta awaamiirtii Galkacyo.
Seteembar 10, 2016 3:41 b 0
Galkacyo, Sep 10 2016-Afhayeenka madaxtooyada dowladda Puntland Cabdullaahi Maxamed Jaamac Quraan-jecel ayaa maanta kormeer kutegey goobo kuyaal magaalaa Galkacyo oo ay kasocdaan kala wareejinta xoolaha iyo badeecooyinka.
Cabdullaahi Maxamed Jaamac Quraan-jecel, ayaa kormeerka kadib waxa uu warbaahinta u sheegay in shaqadii kala wareejinta xoolaha iyo badeecooyinka magaalada Galkacyo oo lagu hirgeliyey wareegto dowladda kasoo baxday.
DHEGEYSO-Wadooyinka Muqdisho oo xiran iyo Madaxweynaha oo kahadlay.